Pedostrilia ရှိ Frontostriatal စနစ်နှင့် Cerebellum တွင်ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံဆိုင်ရာ ဦး နှောက်ပုံမှန်မဟုတ်သော (၂၀၀၇) - သင့် ဦး နှောက်သည် Porn On
မှတ်ချက်များ - မူးယစ်ဆေးစွဲခြင်း၊ အစားအသောက်စွဲခြင်းနှင့်ရောဂါဗေဒလောင်းခြင်းများသည်သာမန် ဦး နှောက်ကိုပြောင်းလဲစေပါတယ်။ အဓိကအပြောင်းအလဲတစ်ခုမှာ hypofrontality ဟုခေါ်သောတိုကျရိုကျအကှေ့အကောငျးနှငျ့ဇီဝြဖစ်ပျက်မှုကိုကျဆင်းစေသည်။ ဒီလေ့လာမှုက pedophiles မှာလည်း hypofrontality ရှိတယ်လို့ပြတယ်။ Pedohilia ကိုစွဲလမ်းမှု - စွဲလမ်းစေသောရောဂါနှင့်အတော်အတန်စဉ်းစားသည်။ ဒီ posting ၏, ဘယ်သူမှ porn စွဲ၏ ဦး နှောက်ကိုစကင်ဖတ်စစ်ဆေးမှုလုပ်ဆောင်ခဲ့သည်။ မည်သို့ပင်ဆိုစေကာ, ဒီလေ့လာမှုကိုလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအနိုင်အထက်အားလုံးစွဲ၌တွေ့မြင်သော hypofrontality ဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည်ကိုညွှန်ပြ။
J ကိုစိတ်ရောဂါ Res ။ 2007 နိုဝင်ဘာ; 41 (9): 753-62 ။ EPub 2006 ဇူလိုင် 31 ။
Schiffer B, Peschel T က, ပေါလုသည် T, Gizewski အီး, Forsting M က, Leygraf N ကို, Schedlowski M က, Krueger TH ။
Forensic စိတ်ရောဂါကုသမှု, တက္ကသိုလ်ဆေးရုံအက်ဆင်း, Duisburg-အက်ဆင်း၏တက္ကသိုလ်, Virchowstrasse 174, D-45147 အက်ဆင်း, ဂျာမနီ၏ဦးစီးဌာန။ [အီးမေးလ်ကိုကာကွယ်ထားသည်]
ယခင် neuropsychological လေ့လာမှုများနှင့်လက်တွေ့အမှုအစီရင်ခံစာများ pedophilia နှင့် frontocortical ကမောက်ကမဖြစ်မှုအကြားတစ်ဦးအသင်းအဖွဲ့အကြံပြုခဲ့ကြသော်လည်း pedophilia အခြေခံသည့် neurobiological ယန္တရားများအကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့အသိပညာနေဆဲ fragmentary ဖြစ်ပါတယ်။ အထူးသ, ထိုကဲ့သို့သောပုံမမှန်များ၏ဦးနှောက် shape သုက်ပိုးပုံသဏ္ဌာန်သေး MR ပုံရိပ်နည်းစနစ်ကို အသုံးပြု. စုံစမ်းစစ်ဆေးနိုင်ခြင်းမရှိသေးပေ။
တစ်ဦးနှိုင်းယှဉ်လူမှုစီးပွားရေးလှာကနေတပြင်လုံးကို 1 pedophile လူနာထံမှဦးနှောက်တည်ဆောက်ပုံ T18 မာန်တင်း MR ပုံရိပ်တွေ (9 အထီးဖို့စိတ်ဝင်စားတဲ့,9အမျိုးသမီးဖို့စိတ်ဝင်စားတဲ့) နှင့် 24 ကျန်းမာအသက်အရွယ်-လိုက်ဖက်ထိန်းချုပ်မှုဘာသာရပ်များ (12 hetero- နှင့် 12 လိင်တူဆက်ဆံသူ) အလိုအလျောက် optimized အသုံးပြု. လုပ်ငန်းများ၌ခဲ့ကြသည် မျိုးစုံ linear ဆုတ်ယုတ်အတွင်း voxel-based morphometry လေ့လာဆန်းစစ်။
အဆိုပါလိင်တူဆက်ဆံသူနဲ့လိင်ကွဲထိန်းချုပ်မှုဘာသာရပ်များနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင် pedophiles ပြသသည် orbitofrontal cortex နှင့် cerebellum (ကိုလည်း nucl သို့တိုးချဲ့။ accumbens) ကို ventral striatum အတွက်မီးခိုးရောင်ကိစ္စအသံအတိုးအကျယ်လျော့နည်းသွားသည်။ ယင်းတွေ့ရှိချက်နောက်ထပ် frontostriatal morphometric မူမမှန်ခြင်းနှင့် pedophilia အကြားတစ်ဦးအသင်းအဖွဲ့ဖော်ပြသည်။ ဤအမှု၌ကဤတွေ့ရှိချက်များအားလုံး obsessive-compulsive spectrum ကိုမမှန်အတွက် shared etiopathological ယန္တရားရှိသောယူဆချက်ကိုထောကျပံ့နိုငျသညျ။